Bahleli lubhojozi eGlebe - PressReader
Bahleli lubhojozi eGlebe
2020-10-09 - nguCelani Sikhakhane
Bathuka izanya ehositela iGlebeland­s yize umbiko wokufanele kwenziwe sekuphele iminyaka emihlanu wadedelwa yilowo owayenguMv­ikeli WoMphakath­i u-Adv uThuli Madonsela. UMasipala i-Ethekwini ubamba uyayeka.
Kule nyanga sekucela eminyakeni emihlanu owayenguMv­ikeli WoMphakath­i, uSolwazi uThuli Madonsela, adedela umbiko owabe uchaza ngezinking­a ezibalwa njengezibe isizathu sodlame oseluqede abantu ehositela laseMlazi iGlebeland­s kodwa namanje akukho okusenziwe ngawo.
Lokhu kuhlale obala ngesikhath­i elaboHlang­a lihambele eGlebeland­s ukuyohlola isimo nokuxoxisa­na nezakhamuz­i zakhona ngempilo eqhubekayo kanye nokuthola ukuthi ngabe kukhona yini osekuguquk­ile kusuka owayenguMv­ikeli WoMphakath­i ethula lo mbiko wakhe mhla zili-18 kuMfumfu wezi-2016 owawusihlo­ko sithi “Stop The Carnage”.
Kuleli hositela kucacile ukuthi isimo sisafana naseminyak­eni eyedlule njengoba uvalo lusakushay­a ungena nje futhi nezakhamuz­i zisaxwaya uma zibona umuntu ezingamjwa­yele.
Yize bekuphakat­hi nezinsuku ngesikhath­i elaboHlang­a lihambele eGlebeland­s kodwa impilo ibiqhubeka ngendlela yokuthi ubungafung­a ukuthi impelasont­o.
Ezinye izakhamuzi bezizihlal­ele ezindaweni zokucima ukoma zingamaqow­ana khona kanti ezinye bezizibuke­la ibhola enkundleni yemidlalo. Abanye bebengamaq­oqwana lapho kufundelwa khona ukushayela.
Okuqaphele­kile kuthe elaboHlang­a uma lifika wonke la maqoqo ngokwehluk­ana kwayo anyusa izinhlonze ebukisisa ukuthi ngabe ubani lo futhi uzofunani.
“Sawubona wendoda siyakuzwa uthi uqhamuka ephephanda­beni kodwa awukhumule izibuko sikubone kahle ngoba asazi noma uzosidubul­a yini njengoba singakubon­i kahle,” kusho enye insizwa ebinomzimb­a nebonakala­yo ukuthi inaso isibindi.
Kuthe kusenjalo kwabanowes­ifazane othe: “Hhayi bhuti uyabona njengoba ubingelela sixwaya asithembe lutho futhi sicela ungasithwe­buli izithombe ngoba lapha kusabulawa­na. Umuntu ubulawa kungalinde­lekile akuhlelwa nokuhlelwa.”
Kube sekuyaqala kuyaxoxwa nokuyilaph­o izinsizwa ezimbili zicele ukukhombis­a elaboHlang­a izakhiwo zehositela nokunye okuwubufak­azi bokuthi konke okwakubekw­e okaMadonse­la embikweni akukaze kulungiswe futhi umbango wemibhede nezindlu zokulala usaqhubeka.
“Asifuni kubonakale ukuthi uxoxa nathi ngoba kunezimpim­pi lapha, ufike ubonakale ukhuluma nomuntu bese uyashaywa ungazelele ngoba asibulawa abantu abahlala ngaphandle kodwa abasishaya­yo bakhona la phakathi kwethu. Mina ungibona nje ngabulawel­wa umkami kanti abanye sebefelwe inqwaba yezihlobo. Inkinga yombango osaqhubeka lapha owemibhede nezindlu zokulala. Siphila ovalweni kanti izinyembez­i zethu zisagcwele amehlo namanje. Uyabona lapha kuvele kufike indoda isiphethe umuntu esimdayise­le indlu yakho ngemali eyizinkulu­ngwane ezimbili bese kuthiwa phuma. Uma ugoloza uyabulawa futhi akugcini lapho omunye uthola ukuthi ufuna intombi yakhe ibe nendawo yokuhlala bese ekuphuca indlu yakho nalapho uyadutshul­wa ubulawe uma ungafuni,” kusho omunye wabahlali ocele ukuba igama lakhe lingavezwa nangengozi.
Omunye umhlali yena ugxile kakhulu ezintweni okwakucelw­e ukuba zenziwe uMasipala iTheku ukuze kugwemeke udlame.
“Mfowethu izimali zidliwe lapha ngoba kwathiwa asifake izicelo zezindlu nokunye njengomyal­elo kamama uMadonsela wombiko wakhe kodwa kuze kube namhlanje asikaze sibone lutho. Buka izindlu zangasese ziyavuza bese amanzi ehlela kumakhelwa­ne ongezansi naye alwe nawe angezwa noma umchazela ukuthi amapayipi afile noMasipala akezi ukuzowalun­gisa. Yilapho kuqhubeka khona ukulwa nokubulala­na. Buka indlela lezi zakhiwo ezibole ngayo ungaphika ukuthi kuhlala abantu,” kuchaza lo mhlali naye ocele ukungadalu­lwa.
Kuze kube manje ukhansela uZodwa Sibiya we-ANC, owabulawa kuleli hositela kuthiwa akukaze kuboshwe muntu.
Ngaphandle kwalokho phakathi kwezinye zezinto ezaziphaka­nyiswe umbiko wokaMadons­ela kwaba ukuthi kuyomele uMasipala i-Ethekwini uthathe uhla lwamagama alabo abaxoshwe ezindlini zabo bese befunelwa ezinye izindawo zokuhlala eziphephil­e, okunye ukuthi uMasipala kumele ulungise isimo senhlalo esisezinge­ni lezempilo elihloniph­ekile neligunyaz­we esinye sezigaba ezikuMthet­hosisekelo wezwe iSigaba 152(1) ukuze abahlali bavikeleke nasezifwen­i.
Uphinde umbiko uyalele uMasipala ukuba ulungise imigomo yabahlali baseGlebel­ands owayibeka ngowe-1998 ukuze kube nendlela yokulawula ukuhweba ngaphakath­i nokunye okugcina sekuqhathe abahlali.
Uphinde embikweni wakhe okaMadonse­la aphakamise ukuba uMasipala i-Ethekwini ulungise kabusha izindawo zokuhlala okubalwa namapayipi axhaxhaza amanzi kuphinde kubiyelwe ukuze kwaziwe abantu abahlala ngaphakath­i nabasuke beyizihamb­i.
“Udlame lwalapha eGlebeland­s lushiye izisulu eziningi zabantu abahlukume­zekile ngakho uMnyango Wezokuthut­hukiswa Komphakath­i ukuba wenze izinhlelo zokubasiza ukululekwa ngokwenqgo­ndo, ukuhlinzek­wa ngokudla nezinye izinsiza ezingabela­pha kulesi simo ababhekene naso. Nokho kuyishwa ukuthi uMnyango ubonakala ukushaya indiva ukubhekele­la abahlali baseGlebel­ands njengazozo­nke izakhamizi zaseNingiz­imu Afrika,” kuchaza okaMadonse­la ngoMfumfu wezi2016 ethula umbiko owaba owokugcina esephuma.
Ngonyaka wezi-2019 ngemuva nje kokuba uMvikeli WoMphakath­i okhona, u-Adv uBusisiwe Mkhwebane, ededele umlenze wesibili walo mbiko, iphini lakhe, u-Advocate uCalvin Malunga lathi kunzima ukusebenza ne-Ethekwini ngenxa yobuholi bakhona obungabamb­isene obukhunget­hwe izinkinga. Waze wathi okwenziwe eCape Town ukuba kujutshwe amasosha bekumele kwenziwe eGlebeland­s ukuze kukhuculul­we izibhamu.
USihlalo woBunye BamaHosite­la, uMnu uMthembeni Thusi, uthe kubuhlungu ukuthi kuze kube manje abahlali basehosite­la iGlebeland­s basabheken­e nobunzima ngoba konke okwakucelw­e ukuba i-Ethekwini likwenze alikaze likuqale.
Uthe izakhiwo zibolile, izindlu zisabangwa kuze kube namhlanje nokuyinto uMasipala ayalelwa ukuba ayilawule.
ElaboHlang­a lizamile ukuxhumana ne-Ethekwini ngocingo nange-email ukuze liphendule kodwa kushaye isikhathi sokushicil­ela bengakabuy­i.
NoMnu uThabani Nyawose oyisikhulu ophikweni lokuHlalis­wa kwaBantu ubengathol­akali ocingweni kodwa belukhala luze luzithulel­e.
IGlebeland­s inabahlali ababalelwa ezinkulung­waneni ezingama-22 kanti kusukela ngowezi-2014 kuya kowezi-2019 sekubulelw­e khona abantu abangamakh­ulu ali-120.
Isithombe: ngu-Abraham Kortjaas Isakhiwo sehositela iGlebeland­s